Saahid iyo Feetin
Ajinimaan u dhalanay.
Gabaygii Dubbad Hiirad iyo kii Faarax Nadiif ee Silsiladda Guba furay waxaa xigay oo geedkii ugaasku fadhiyey soo joogsaday Saahid Qamaan Cali oo hor kacaya fardooleey uu af-hayeen u yahay, wuxuuna tiriyey gabaygii saddexaad ee Silsiladda. Saahid wuxuu butaacay gabayga caanka ah ee “Sinnaan” la baxay oo murti carrakawaa ah xambaarsan. Waa gabay xilli walba munaasab ah, kali- talisnimadana iyo macangagnimadana kasoo horjeeda.
Wuxuu xusay in talo la wadaago iyo ina-adeerow raggu wuxuu ku dhaamo aanay jirin, in tolka dhib iyo dheefba qayb u tahay oo si siman oo cadli ku jiro loo wadaago, in dadku gaar ahaan raggan ay wada dhasheen ee ay is hayaan siman yihiin oo mid ka kale wax dheer aanu ku jirin, haddii ay ka tagi weydana isagu uguba sito. Ninkii indhaha iga laliya ee iga maarma uma baahni, kii aan tolnimadayda rabin tiisa ma doono, ayuu raaciyey. Wuxuu kusoo xidhay weerar uu ku qaaday Faarax Afeey. Oo muxuu ku galay Faarax-Afeey? Maalin kale iyo maqaal kale ayeynu ku lafaguraynaa arintaa. Gabay dhaxal gal ah ayuu halkaa Saahid ka mariyey, wuxuu ku billaabay:
Gabayga Saahid wuxuu aad ugu eg yahay midka Dubbad. Bal u fiirso; hadduu doobke buuxsamo inuu, daato waw halise halka uu Dubbad ka yidhi, Saahidna wuxuu ka yidhi: muggii weel ma dhaafee Alloow, mooska yaan jabinnin. Halka Dubbad ka yidhi; durbana wuu kibraa sedo ninkay, dacasha saartaaye, Saahid wuxuu ka yidhi; hadday sado macaan tahay ninkii, maadiyaa cune e. Waxay labaduba dagaal aan kala hadh lahayn ku qaadeen Ugaas Xaashi sidii balantu ahayd.
 Ogaadeen, Reer Cabdille, Reer Dalal. Gabayaa weyn oo Ciid, Doollo, Doh iyo inta la ollogga ku dhaqnaan jiray ayuu ahaa. Gabay iyo garba nin hadalka heli og oo wuxuu ahaa markuu doono aan waxba hagoogin ee hadalku halkii uu u dhimanayo taabta. Gabay-daacuun ayey dadka qaarkii ku naanaysi jireen sababtaa awgeed
 Sirow waa Balli Qoriile u dhaw. Dadka qaarbaa sheega in Gondogooye balligaa ka dhacay
 Maxamed: Nebi Maxamed (NNKH) inuu ujeedo ayaa loo badiyey
 Magowshaha: godolka ama magowga ugu horeeya. Lidkiisu waa dharaq
 Saddex magac Alle: wallaahay, billaahay, tallaahay. Waa nooc Soomaalidu u dhaarato
 Miilo-qayb: ceelasha biyaha yar oo qolaba mar ama kal cabto si loo maaxiyo. Kaltanna waa la yidhaahdaa
 Magan waa odayga Saahid ku arooro
 Masaa: eray aasalkiisu Af Carabi yahay oo macnihiisu yahay isku mid ama siman
 Miidhse diidaniye: quudhsi ma oggoli oo qaadanmahayo
 Faarax Maxamed Madar (Faarax-Afeey) Ogaadeen, Reer Cabdille, Baha Magan.